प्रेरण तार र केबल तताउने अनुप्रयोगहरू
इन्डक्शन तार र केबल हीटर को लागि पनि प्रयोग गरिन्छ प्रेरणा पहिले, विभिन्न केबल उत्पादनहरूमा इन्सुलेट वा शिल्डिङको बन्डिङ/भल्कनाइजेसनको साथमा धातुको तारको तताउने वा एनिलिङ। प्रिहिटिंग अनुप्रयोगहरूले यसलाई तल तान्नु वा बाहिर निकाल्नु अघि तातो तार समावेश गर्न सक्छ। पोस्ट हीटिंगमा सामान्यतया प्रक्रियाहरू जस्तै बन्डिङ, भल्केनाइजिङ, क्युरिङ वा सुकाउने रंग, टाँस्ने वा इन्सुलेट सामग्रीहरू समावेश हुन्छन्। सही गर्मी र सामान्यतया छिटो लाइन गति प्रदान गर्न को लागी, प्रेरण हीटिंग पावर सप्लाई को आउटपुट पावर धेरै अवस्थामा प्रणाली को लाइन गति मार्फत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
HLQ इन्डक्सनले संरचनात्मक लौह र गैर-फेरस तारहरू, तामा र एल्युमिनियम केबल र फाइबर अप्टिक उत्पादनमा कन्डक्टरहरूबाट धेरै अनुप्रयोगहरूको लागि समाधान प्रदान गर्दछ। एप्लिकेसनहरू धेरै फराकिलो छन्, जसमा 10 डिग्रीदेखि 1,500 डिग्रीभन्दा बढी तापक्रममा गठन, फोर्जिङ, तातो उपचार, ग्याल्भेनाइजिङ, कोटिंग, रेखाचित्र आदि समावेश छन्।
इन्डक्शन तार र केबल तताउने फाइदाहरू के हुन्?
प्रणालीहरूलाई तपाइँको कुल तताउने समाधानको रूपमा वा प्रिहिटरको रूपमा कार्य गरेर अवस्थित भट्टीको उत्पादकता सुधार गर्न बूस्टरको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। हाम्रो इन्डक्शन हीटिंग समाधानहरू तिनीहरूको कम्प्याक्टनेस, उत्पादकता र दक्षताका लागि प्रसिद्ध छन्। जहाँसम्म हामी समाधानहरूको दायरा आपूर्ति गर्छौं, धेरै जसो तपाईंको विशिष्ट आवश्यकताहरू पूरा गर्न अनुकूलित हुन्छन्।
इन्डक्सन तार र केबल तताउने कहाँ प्रयोग गरिन्छ?
-सफाई पछि सुकाउने वा कोटिंग्सबाट पानी वा विलायक हटाउने
- तरल वा पाउडर आधारित कोटिंग्स को उपचार। एक उच्च बन्ड बल र सतह समाप्त प्रदान गर्दै
- धातु कोटिंग को प्रसार
- पोलिमर र धातु कोटिंग्स को बाहिर निकाल्न को लागी पूर्व तताउने
-तातो उपचार सहित: तनाव कम गर्ने, टेम्परिङ, एनिलिङ, ब्राइट एनिलिङ, कडा बनाउने, पेटेन्ट गर्ने आदि।
-तातो-बनावट वा फोर्जिङको लागि पूर्व-तातो, विशेष गरी विशिष्ट मिश्र धातुहरूको लागि महत्त्वपूर्ण।
इन्डक्शन हीटिंगको अतुलनीय शुद्धता, नियन्त्रण र दक्षताले तार र केबल उत्पादनहरूको निर्माण र प्रशोधनमा धेरै मुख्य कार्यहरूको लागि यसलाई आदर्श बनाउँछ।
०.८ सेकेन्डमा २०४ डिग्री सेल्सियस (४०० डिग्री फारेनहाइट) मा धेरै फरक तारहरू उहीसँग तताउनुहोस् प्रेरणा कुंडली.
उपकरण: DW-UHF-6KW-III इन्डक्शन हीटर
१. तारको लम्बाइमा २०1 डिग्री सेल्सियस (°०० डिग्री एफ) टेम्पिलक सफा गर्नुहोस् र लागू गर्नुहोस्।
२.2 सेकेन्डको लागि इन्डक्शन गर्मी लागू गर्नुहोस्।
परिणामहरू र निष्कर्षहरू:
सबै तारहरूले कोयलको पूरा लम्बाईमा २०204 डिग्री सेल्सियस (°०० ° एफ) पार गर्‍यो। थप विकास परीक्षण उपलब्ध छिटो दरहरूको लागि अनुप्रयोगको लागि उपकरणहरू अनुकूलन गर्न आवश्यक पर्दछ। ट्युनिंग र उपकरणको अप्टिमाइजेसन इकाईमा लगातार वायर फिडको साथ गर्न आवश्यक पर्दछ।
नतिजाहरूको आधारमा, 6kW इन्डक्शन हीटिंग पावर सप्लाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, र थप विकास परीक्षणले वांछित दरहरूको ग्यारेन्टी गर्नेछ। एक 10kW इन्डक्शन हीटिंग पावर आपूर्ति सिफारिस गरिनेछ। थप पावरले अन्तिम प्रयोगकर्ताका लागि ट्युनिङ र विकास परीक्षणलाई सजिलो बनाउनेछ र उत्पादन दरहरू भविष्यमा सजिलै बढाउनको लागि थप पावर छोड्नेछ।
विभाग सोधिने प्रश्न, टेक्नोलजीज ट्याग केबल हीटिंग प्रेरण, उच्च आवृत्ति केबल हीटर, उच्च आवृत्ति तार ताप, प्रेरण केबल हीटर, प्रेरण केबल तताउने, प्रेरण तार र केबल तताउने, प्रेरण तार हीटर, प्रेरण तार तताउने, प्रेरण तार हीटिंग सिस्टम, तार तताउने प्रेरण मेल अन्वेषण